Ho an’ny 10 taona ho avy: nandrafitra ny asa hataony ny faritra Boeny | NewsMada
Ho an’ny 10 taona ho avy: nandrafitra ny asa hataony ny faritra Boeny
Niara-nivory namaritra drafitra ho fampandrosoana ny faritra (PRD)* ny any Boeny tamin’ity fiandohan’ity herinandro ity. Nitarika ny fivoriana ny tale fampandrosoana ny faritra, Randriambololona Marcellin, niaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka teknisianina sy mpamatsy vola.
Nofaritana tamin’io fotoana io ny drafitra fampandrosoana ny faritra Boeny ho an’ny 10 taona manaraka sy ny paikady hoentina hanatanterahana izany. Ilaina ho fantatry ny rehetra ny paikady na hevitra ho fifanomezan-tanana hampiharana azy. Notsiahivina fa maro ny dingana efa vita, toy ny fakan-kevitra teny amin’ny distrika enina. Teo koa ny fanaovana jery todika ny vita tany amin’ny 10 taona lasa.
Ao aorian’izao fivoriana izao, harafitra ny hevitra rehetra manan-danja voaangona avy any ifotony. Haroso manoloana ny Komitim-paritry ny fampandrosoana izany avy eo, handraisana tolokevitra avy amin’izy ireo ka amin’ny volana mey ho avy izao no heverina hanatanterahana ny fankatoavana ny PRD Boeny ho an’ny folo taona manaraka. Tsy azo hadinoina anefa fa miova izao ny drafitra fitantanana ny faritra amin’ny alalan’ny governora.